Bhokisi Kuvaka & Gungano reMechanical
Radio frequency maPCB
Radio frequency (RF) pcb uye microwave pcb inogona kuwanikwa mune zvisina waya zvigadzirwa kubva pamaoko ekushandisa ekurapa nemaindasitiri ekushandisa kune ekutaurirana masisitimu ezviteshi zvepasi, radar, uye masisitimu epasirese epasirese. Chinhu chakanyanya kukosha pakugadzira rad ...
Chero Rakagadzika HDI Rakadhindwa Circuit Board
HDI pcb ine multilayer mabhodhi ane yakakwira yekubatanidza pad padhi pane akajairwa mabhodhi, ane akanakisa mitsara / nzvimbo, zvidiki kuburikidza nemakomba uye mapikicha ekutora anotendera ma microvias kungopinda chete mukati sarudza matanda uye zvakare kuiswa mukati pevhu mapedhi. ...
Nguva yekugadzirira Chinese Nyowani Nyowani 2021
Ruzhinji rweChinese Idzva Idzva zororo 2021 ndiFebruary 12 kusvika munaFebruary 26. Sezvo iri iri zororo reruzhinji renyika rinobata zvigadzirwa zvese muChina. Zvakare, sezvo kuchine kusava nechokwadi kwakawanda nepasi rose coronavirus denda, uye kubva kwatiri chiitiko cheiyo yapfuura Year New holi ...
Electronica South China Exhibition muShenzhen
Electronica, imwe yeanotungamira maonesheni muindastiri yemagetsi, vhura chiitiko chayo chekutanga muSouth China. Iko kuratidzwa kwemazuva matatu kunotanga kubva munaNovember 3, 2020 paiyo nyowani Shenzhen International Conventional Center. Iyo exhibitio ...
Chinese Mid-Autumn mutambo uye zuva reNyika
Gore rino mutambo weChinese Mid-Autumn nemusi weNational unoitika mukati mevhiki rimwe chete; 1 - 7 Gumiguru. Sezvo mazororo aya anogona kukanganisa kugadzirwa kuChina mumadhigiri akasiyana, isu tinogara tichigadzirira zviito-kuronga pamwe newe kuti uwane nzira dzakasiyana dzekudzivirira ...
ne admin pane 19-04-10
Pandawill Circuits, nyanzvi pcbb & PCBA mutengesi kubva kuShenzhen China achazopa ayo PCB matekinoroji uye pcb musangano masevhisi pane hombe zvemagetsi show Expoelectronica muRussia. Huya usangane naStephen anobva kuPandawill Circuits kuA284 kuzokurukura yako ese Pcb Kugadzira uye Ass ...
Pcb Kurongwa Service Inowanikwa
ne admin pane 19-02-01
Kune edu akakosha vatengi, pcb marongerwo uye dhizaini nzira ndeimwe yenzira dzatinobatsira vatengi vedu kusvika kumusika nekukurumidza sezvo yedu yeinjiniya timu ine yakakosha yepasirese ruzivo kuronga maPCB ekuita uye kugadzirwa. Chikwata chedu cheinjiniya uye maCAD / CAM maanoshanda anowanikwa t ...
Chinese Gore Idzva 2019, Gore ReNguruve
ne admin pane 19-01-01
Chinese Chinese New Year zororo Ruzhinji rweChinese New Year mazororo 2019 ari Kukadzi 4 kusvika Kukadzi 10. Mwaka weChinese Nyowani ndiyo yakakoshesa zororo rechinyakare muChina. Iyo inozivikanwa zvakare seMuchirimo Mutambo. Chinese Mhemberero dzeGore Idzva tsika dzaimhanya kubva kuChinese Idzva Idzva ...